Amir Ahmed bin Abdul Aziz oo ah boqorka walaalkiis ayaa laga yaabaa in uusan ku noqon dalkiisa… – Hagaag.com
Amir Ahmed bin Abdul Aziz oo ah boqorka walaalkiis ayaa laga yaabaa in uusan ku noqon dalkiisa…
Posted on 8 Seteembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Majalada Middle East Eye ee ka soo baxda Britain ayaa shaaca ka qaaday in Prince Ahmed bin Abdul Aziz Al Saud oo ah boqorka Sacuudiga walaalkiis, uu ku dhegan yahay hadal uu u jeediyey dad ku mudaaharaadayey dibada gurigiisa ee caasimada Ingriiska ee London, oo sheegay baahida loo qabo in dusha laga saaro Boqorka iyo dhaxal sugaha mas’uuliyada waxa ka dhacaya gobolka.
Qoraaga maqaalkan David Hurst ayaa sheegay in Prince Ahmed bin Abdul Aziz uu ka fekerayo in uusan ku laaban dalkiisa, kadib hadalkii uu bixiyey oo kaga fogeeyey reer Al Sacuud dembiga kuna koobay Boqorka iyo wiilkiisa, sida laga soo xigtay ilo ku dhow amiirka.
Dad ku dibad baxayey gurigiisa hortiisa ayaa ku dhowaaqayey “ha dhaco al Sacuud, qoyska mujrimiinta” taasi oo ka dhigtay amiirka inuu la hadlo oo weydiiyo “maxaad u leedihiin sidan qoyska al-Sacuud? oo maxaa ka wada galay qoyska al-Sacuud arrintani? Waxaa halkaasi jira shaqsiyaad khaas ah ayaa qaaday mas’uuliyada, ma haboona inaad dad kale dusha ka saartaan.
Markay mudaaharaadayaashu waydiiyeen yaa iska leh mas’uuliyada, wuxuu amiirka ku jawaabay “boqorka iyo dhaxal sugaha iyo kuwo ku jira dowlada”. Video-gaasi ayaa si deg deg ah ugu faafay baraha bulshada, halka # ee twitter lagu sheegay in ay u baayacayaan Ahmed bin Abdul Aziz Boqornimo.
Dhinaca kale Wakaalada wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in laga been abuurtay hadalka amiirka, mana aheyn hadalada la faafiyey kuwo Amiirka ku hadlay.
Hurst ayaa tilmaamay, in dhacdadan ay tahay tii ugu horaysay oo xubin ka tirsan qoyska al-Sacuud oo darajadan sare leh oo lagu yaqaanay aamusnaanta inuu si ula kac ah isaga fogeeyo xukunka Boqor Salmaan.
Wuxuu ku daray haday cadaato in Amiir Ahmed uusan ku noqon wadankiisa ay taasi ku noqoneyso caqabada ugu weyn ee ka hor timaada xukunka Boqor Salman.